Izindlela ezisixhenxe zokunqoba uxinzelelo kumama ozayo
Imvakalelo engebiyo, ukuvuya kunye noxinzelelo, eqinisweni, ukuthatha amandla amaninzi kumama ozayo. Kodwa, kufuneka uzame ukugcina isimo sakho sengqondo phantsi kolawulo, gcina uxolo lwengqondo. Oku kwenziwa njani?
Ngethuba lokukhulelwa, umfazi uhlala ecatshukiswa, enomdla kwaye ekhuselekileyo. Ukucacisa olo tshintsho lwenkqubo ye-nervous ilula, yona, inkqubo ye-nervous, iphendula ngokucacileyo kwiinguqu ezenzeka emzimbeni. Ngenxa yoko, kukho iintlungu ezahlukahlukeneyo, iimvakalelo, ukucaphuka. Kodwa unokukunqoba imvakalelo yakho, njengoko kukho iindlela ezisixhenxe zokunqoba ukuxinezeleka komama ozayo.
Indlela yenombolo 1
Ukugqithisa ngokugqibeleleyo kwaye kukuvumela ukuba uvumelane nomzimba wakho nokucamngca ngomoya. Akumangalisi ukuba abalandeli bale ndlela yokuphumla bathi bangakwazi ukuthemba intuition, ukudala, ukuphupha nokuvula indlela yokuvisisana. Kwabesifazane abakhulelwe, unokucinga ngomntwana wakho ozayo, indlela ahamba ngayo, indlela ekhangeleka ngayo, indlela aphulaphula ngayo ilizwi likaMama. Ngoko, unomama onomhlali onokuza kuba sele esivela kwiingcamango eziqaqambileyo, ezizenzele yona.
Indlela yeNombolo 2
Xa kwenzeka into embi, imikhosi yomzimba iya kusombulula ingxaki. Umzimba uqala ukusebenza kumoya oqinisiweyo. Iba yinto engaphelelekanga kwaye iphakathi, ngoko ke, umoya ungangena kwimiphunga. Ngako oko, umzimba ugxininiswe. Mhlawumbi, ngeli xesha, umama uyaqaphela ukuba umntwana osesiswini uqale ukuhamba ngamandla. Yonke le nto ngenxa yokuba akakhululekile. Ukunceda umntwana, kufuneka uthathe umoya ophefumulayo, uthabathe isisu esiswini, kuphela kwindlela eyahlukileyo yokukhupha uxinzelelo, kuphela kufuneka uzame ukukwenza.
Indlela yenombolo 3
Ngezinye izihlandlo xa umntu eyanqotshwa ngcamango engafanelekanga, umntu kufuneka ahlanganyele kwisiphakamiso sakhe. Kufuneka uzenzele ibinzana eliza kukunceda kwaye ulungele ukuphindaphinda, umzekelo, "Yonke into iya kulungiswa!" Okanye "Ubomi buhle." Ngubani othandayo, ngoko unokuphinda, ngokubaluleke kakhulu, ukuba ibinzana lalinomphumela. Iingcali zeengqondo ze-Perinatal zithi unokukwazi ukuphulaphula umculo wakho ozithandayo ngamanye amaxesha. Kule ngongoma, unokucinga indlela izandi, ukuthakazelisa, ukungenelela kuyo yonke iseli yomzimba, kwaye uzame ukuba enye kunye nomculo. Umculo. Ukumangalisa nje kunokunqoba ukunyamezeleka komama ozayo kwaye kuthintele ukubonakala kwakhe.
Indlela No. 4
Kunconywa ukuba ujoyine i-gymnastics kwabasetyhini abakhulelweyo, kukuvumela ukuba ukhulule ukuxhatshazwa, ukuhlawula umzimba ngamandla anamandla. Emva kweeklasi, awukwazi ukunyamezela kwaye ungaziva ukhulula ngamandla. Kwaye akudingekile ukuba uhlanganyele ekuzilolweni kusasa, kunokwenzeka ukuba uphumelele nangaliphi ixesha lemihla.
Kulabo abafuna ukuhlukahluka, unako ukuhambisa i-massage. Makhe enze intandokazi, kuba umnxeba wakhe, ngaphezu kweenzuzo kuza kuzisa izinto ezintle, kwaye ngoko kuya kuba mnandi kumntwana.
Indlela yeNombolo 5
Kuye kwadluliwe ukuba abantu abafihlakeleyo kunzima ukuhlala naluphi na umqathango kwaye baninzi babecala ukuxinezeleka. Zonke iingxaki eziqokelela, ngokuthe ngcembe kwaye zincinci, zikhokelela ekudakaleni. Ukuze uyiphephe, unokuxelela amava, umhlobo osondeleyo, umyeni wakhe. Ukuba akukho mntu onjalo onokubambiselwa eyona mfihlelo, kuyacaca ukuba ubeke zonke iphepha, ube nedayari, okanye ubuncinane ibhulogi ye-Intanethi. Enyanisweni, kunceda. Ukuba kukho impikiswano, umzekelo, kunye nendoda, akukho mfuneko ukuba isonge. Yixubushe nje into engafanelekanga kwaye mhlawumbi uya kuyilibala ngokungaqondi.
Indlela No. 6
Ukuzalisa iminqweno yakho, yenza okuyimfuneko kwaye uyamnandi kuwe. Umzimba ubasabalalisa ubuncwane bawo, ngoko ke ukuba umfazi okhulelweyo ufuna ukutya into engavamile, ungayinqabeli. Ngenxa yoko, umzimba ufuna into ekhoyo kule mveliso. Ibhinqa, linandipha ukuba iminqweno ingazaliseka. Ukuzaliseka kweminqweno kwaye yindlela efanelekileyo yokunqoba uxinzelelo lomama ozayo.
Indlela yeNombolo 7
Ukuze unqobe uxinzelelo, ungenza uhambo lokuthenga. Kwaye ukuba unjengabantwana, ngoko-ke ukuzivala kakuhle kuyaqinisekiswa. Musa ukuyeka ukuzonwabisa into endiyithandayo. Musa ukukholelwa ekucaleni. Xa uthenge izinto ezincinci okanye udibanisa, kwaye ucinga ngezi zinto ekhaya, ungazivakalelwa phezulu.
Kungekudala, umama ozayo uza kuba ngumama wokwenene, ngoko akufanele unikeze naziphi na iingcinezelo ukunqoba ummangaliso wokuba ngumama.
Ukukhulelwa, ubuhlungu obukhulu besisu
Indlela yokukhetha ipilisi yokukhusela ngokwakho
Ngendlela efanelekileyo ukukhuselwa okokuqala ngqa?
Ioli e-flaxseed ngexesha lokukhulelwa
Ifilophu iphupha elingenakwenzekayo?
Ukusetyenziswa kweoli efunekayo ye-yarrow
Indlela yokulungela isidlo sokuthanda ekhaya ekhaya indoda?
Ifashoni njani yamagxa amaninzi?
Iipropati ezisetyenziswayo zeBurger
I-Horoscope yomculi, unyaka womvundla
Ukuvalelwa kwinyanga yesithathu yokukhulelwa
Iifestile kunye neengcango zanamhlanje ekwakheni iindawo zokuhlala
Ukutshitshiswa kwelahla kwilizwe ngezandla zabo
Musa ukuhamba emva kokuhlukana nomhlobo wakho
Buckwheat kunye nenyama egayiweyo
I-recipe ye-pie nge jam
Isaladi kunye nequinoa, isipinashi kunye namakhowe